साहित्य-सागर: November 2008
उसले पहिलो पटक रेष्टुरेण्टको उद् घाटन गर्दा मलाई निम्तो दिएको थियो ।यो दोश्रो अवसर उसले आफ्नो कृति लोकापर्ण गर्नलाई कार्यक्रममा निम्त्याएको थियो,मैले सहर्ष स्विकारें । कार्यक्रममा निकै खर्च गरिएको हुनुपर्दछ,उपस्थित सबैलाई पुस्तक र खानपिन नि:शुल्क थियो। केही महिनापछि मैले उसलाई फोन गरेर पुस्तक के कति रहेको सवाल गरें,उसले सबै सकियो भन्ने जवाफ दियो ।त्यसपछि हाम्रो सम्पर्क भएन ।रै पनि उसको चर्चा शहरका साहित्य सर्जकहरुमाझ फैलिएको थियो ।वर्षदिन भित्रै प्रकासित पुस्तक सकिएको कुराले मलाई पनि पुस्तक प्रकाशन गर्न ईच्छा जाग्यो ।
एकदिन आफ्नो कृतिको भूमिका लेखाउन र पुस्तक चाँडै बिक्री गराउने रहस्य माग्न उसको रेष्टुरेण्ट गएँ ।जहाँ नाम परिवर्तन भएकोले ठम्याउन धामा पर्‍यो ।नयाँ साहुजीलाई सोधें,उहाँले भन्नुभयो-'पुस्तक प्रकाशन गर्नलाई मबाट उसले कर्जा लिएको थियो ।सर्त बमोजिम तिर्न नसकेकोले रेष्टुरेण्ट मेरो भयो ।आजकाल उ यतै-कतै भौतारिएर हिंडेको देख्छु ।'यस कुराले मेरो चेहेराको नूर मलिन भयो । औप चारिकता जताउनलाई कफी मगाएँ।झोलाबाट पाण्डुलिपी झिकेर नियालें,त्यसपछि निराकरण गर्दै रमाना भएँ ।
Posted by डिआर निश्छल at 4:33 AM 1 comment:
बिद्रोह गरि हिडेकी तिमी
सताब्दी बित्यो किन फर्किनौ....?
मैले कहा-कहा खोजिन तिमीलाई
मैले कहा-कहा सोधिन तिमीलाई
तर तिमी त...............
पृथक बिचारको फुल फुलाउन
हराएकी हुन सक्छौ अर्कै भुगोलमा
यो पनि हुन सक्छ नोरा...!
तिमी यही कतै छौ
देखी रहेकी हौली बेस्यालयहरु
घरेलु हिङ्सा बलत्कार घरि-घरि
यहा अस्तित्व फुल्यो बिना रङ्ग
असमनता फैलियो बिना ढङ्ग
खोई त नोरा....!
यहा तिम्रो बिचार फुलेको..?
फेरि पनि तिमी हिडेकी हुन सक्छ्यौ
नया बस्तीको खोजीमा
अस्वतन्त्रताको पाउबन्दीलाई तोड्दै
अहात देखि अहात सम्मको यात्रामा
फुलेकी हौली तिमी
इब्सोन हरिको नयन भरि
तर म तिम्रो "हेमर"...।
बाचेको छु पुरुशत्वको घुम्टो भित्र
घुम्टो- लाजको समाजिक चित्र
घुम्टो- स्थितिको परिबृत्त
त्यसैले फर्काउ स्वाभिमानी शिर
तोडिदेऊ पुरुशत्वको जन्जिर
हो, नोरा.....! तिमी घर फर्क।
नोरा नसही, सिता बनेर फर्क
तिमी फर्क, नबयुग जन्माउन
आएर लैजाउ आगनीमा अग्नी
अनि नाप मर्दहरुको मर्यादा
परिचय लेऊ पत्निब्रताको
अग्नी परीक्षामा होमी देऊ
हो नोरा......! म तैयार छु।
('नोरा' हेनरिक इब्सोनको बिस्व प्रख्यात् नाटक "पुतली घर" की नायिका हुन् । 'नोरा'ले नाटकको अन्त्यमा आफ्नै पति 'हेमर 'सङ्ग बिद्रोह गरी घर छोडेकी थिई।)
Posted by डिआर निश्छल at 4:59 AM 1 comment:
नहुन् उसको सन्तान
नहुन् कहिल्यै थुम्कीमा उभेर अग्लो बन्नेको सन्तान
नहुन् कहिल्यै आमाको पोल्टो च्यातेर पेट पाल्नेको सन्तान
दुई हातले कमाई दश हातले बाड्ने
दरिद्रै किन नहोस् ऊ पुन्यवान
हुन बरु बेसाहाराहरु अङ्गाल्नेको सन्तान
नखोजोस् स्वार्थमा लुट्पुटिएर मान्छेको मान
नमागोस् लाल्चामा मुछिएर ब्यर्थको इमान
बरु गरोस् हिलो भै कमल फुलाउने
घिन लाग्दो किन नहोस् तर मुल्यवान
हुन् बरु उही पत्थर् पगाल्नेको सन्तान
यहा पाएका त भुतहरुले छन् त्यो स्तुतिगान्
यहा मानव् उपर राक्षसले हरेको छ अभिमान
लखेटेर मानव् बस्ती बाट ति कुरुपहरु
शहिद नै किन नहोस् तर ऊ स्वाभिमान
हुन् बरु सगर खसाल्नेको सन्तान
भोकै मरुन् केभो नधानुन् कसैको चोरेर प्राण
पशु प्राणी नमारुन् छातीमा उसको ताकेर बाण
होस् शकाहारी थोरै खाएर धेरै बाच्ने
अन्धै किन नहोस् तर बिबेकवान
हुन् बरु आत्मा बाल्नेहरुकै सन्तान
नहुन् कहिल्यै स्वास्नी छान्दै तरुनी खेलाउनेको सन्तान
नहुन् कहिल्यै लोग्ने छान्दै नाठो लुकाउनेको सन्तान
दर्साबिकमा रहेर सम्बन्ध बिच्छेद भै
छुटिएकै किन नहोस् तर कर्तब्यवान्
हुन् बरु आ-आफ्नै घर बसाल्नेकै सन्तान
- बसाह १ ,उदयपुर
Posted by डिआर निश्छल at 3:51 AM 1 comment:
तिम्रो आफ्नो बन्छु
तिम्रो आफ्नो बन्छु भन्थे
पराई पनि हुन सकिन
सबको आँसु पुस्छु भन्थें
आफ्नै आँसु पुछ्न सकिन
तिम्रो साथ पाउँदा लाग्थ्यो
सारा खुसी, मेरो नै हो
तिमीले हात समाउँदा लाग्थ्यो
सिंगो संसार मेरो न हो
सधै सधैँ हास्छु भन्थेँ
धित मारेर रुन सकिन
मन्दिर पुग्दा हामी दुवै
एक अर्कालाई आशीष माग्थ्यौँ
एक अर्काको पसिना पुछ्थ्यौँ
धेरै नजिक हुँला भन्थेँ
टाढाको पनि हुन सकिन
सबको आँसु पुस्छु भन्थेँ
Posted by डिआर निश्छल at 2:41 AM 1 comment:
नरेन्द्र आधुनिक विचारको मान्छे । पश्चिमी सभ्यताबाट प्रभावित । रीतिरिवाज, परम्परा केही नमान्ने । जे मनमा आउँछ त्यही गर्नुपर्ने ।उसकी स्वास्नी उर्मिला पनि त्यस्तै । कुनै बन्धन नचाहने, ऊभन्दा पनि अझ एक कदम अगाडि ।
राम्रो जागिर । भव्य बङ्गला । बैङ्क ब्यालेन्स । मोटरकार । नोकरचाकर । ऐसआरामले भरिपूर्ण। न अभाव । न अनिकाल ।एकले अर्काको स्वतन्त्रता हनन नगर्ने । कोही कसैको तगारो नबन्ने । दुवै जनाको सहमति ।नरेन्द्रको आज बाहिर जाने तयारी । श्रीमतीलाई जानकारी दिन्छ- "साथीले बोलाएको छ, उतै बस्छु होला ।"
उर्मिला पनि निकै सजिसजाउ भएर माइत जान तम्सिन्छे ।सहरको एकान्त गल्ली रेड एरियाको नामले प्रख्यात ग्राहकलाई पर्खेर बसेका होटल र लजहरू । एउटा अधबैसे युवक सरासर एउटा लजभित्र प्रवेश गर्छ कोठा बुक गर्छ ।
युवक लजवालालाई सोध्छ- "तपाईंकोमा ...को व्यवस्था छ कि छैन "
लजवाला जवाफ दिन्छ- "चिन्ता नगर्नोस् हजुर सब व्यवस्था छ ।"
युवक आफ्नो कोठामा जान्छ र आशक्तभावले कसैलाई पर्खिरहन्छ ।
एकछिनपछि सेण्डिलको टक...टक...टक... आवाज आउछ । एउटी युवती बिस्तारै कोठामा प्रवेश गर्छ युवक युवतीतिर फर्किन्छ ।
दुवै एक-अर्कालाई देखेर चिच्याउँछन्-
Posted by डिआर निश्छल at 2:37 AM 1 comment:
उठ जाग सर्बहारा सिङ्गदरबार घेरौ अब
शोसक र सामन्तलाई खुकुरीले सेरौ अब
जस्को जोत उस्को पोत हुनै पर्छ संबिधानमा
बसी खाने दलालहरुलाई कानुनले बेरौ अब
शासकहरु राज्य लुटी महलमा मस्ती लिन्छन्
कत्ति बस्ने अध्यारोमा उज्यालोलाई हेरौ अब
अघि बढौ प्रगतीमा श्रमजिबीको सत्ता चलाई
मुठी कस ए भोका हो! राज्य ब्यबस्था नै फेरौ अब
Posted by डिआर निश्छल at 3:00 AM 1 comment:
मेरो अन्दाज बाहिरको
कल्पना भन्दा परको
तिम्रो चेहेराको नूर
अनि,मैले कहिल्यै नदेखेको
म त मदहोशी भए
देखेर तिम्रो सौन्दर्य
कोही कहिल्यौ बन्न सक्दैन होला
जूनलाई पनि ईर्श्या लाग्दो हो
त्यसैले रातमा उदाएको हुनुपर्छ
जव सखार हुन्छ
आफुलाई अमिल्दो पाएर
तिम्रो सौन्दर्यको बखान गरिरहेकोछु
जस्ले मेरो चक्षुलाई घोर्याईरहेछ
समिप आउन लालयित छु
ख्याल गरे हुन्छ मलाई
म जे जसरी नि
सम्बन्धको छेस्को लिएर आउँदैछु
थाहा छैन मलाई
सम्बन्धको निम्ति सौन्दर्यको छनौट
जायज हो या नाजायज
आत्माको छनौट पो
मलाई पर्वाह छैन
देखेर खातिर तिम्रो
ई-मेल : maulshri_limbu@yahoo.com
Posted by डिआर निश्छल at 2:42 AM 1 comment:
टाढा भैयो मेरो नजिक डेरा तिमी सर्ने गर
वान्चाईबाट कहिलेकाही, जोर्डन तिर झर्ने गर
कौलुनको रेस्टुरेन्टमा म सङ्ग तर्केकी थियौ
यसरी त चल्दैन है, मेरो समिप पर्ने गर
युमातेइ मा भेट हुदा साह्रै तिमी झर्केकी थियौ
कत्ती रिसाएको अनाहकमा, माया पनि गर्ने गर
हङकङको सारा खुसी तिमी छेउ ल्याई दिउला
आउन कन्छी यो दिलमा, चोखो माया भर्ने गर
गणतन्त्रमा नेपालको रंग नयाँ- नयाँ
नेपालीको जीबन जिउने ढंग नयाँ-नयाँ
नयाँ जोश ,नयाँ जागर र नयाँ ब्यबस्थामा
जनताको उत्साह र उमंग नयाँ-नयाँ
लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान आदि-आदि
राज्य ब्यबस्थामा पनि अंग नयाँ -नयाँ
उठ जाग हे नेपाली उन्नतीको बिहानीमा
कोरेर आर्थिक क्रान्तिको जंग नयाँ -नयाँ
ई-मेल : atm_sms6pal@yahoo.com
Posted by डिआर निश्छल at 2:02 AM 1 comment:
सीट क्षमता १२ जना मात्र । तर २०-२५ जनाभन्दा घटी कहिल्यै हाल्दैनन् । अझ गर्मीका बेला त्यसरी कोचिएर यात्रा गर्नु पर्दा श्वास गुम्सिएर भित्रै बान्ता आउलाजस्तो हुन्छ । त्यसमाथि छेउमा पसिना गन्हाउने मान्छे पर्यो भने त झन्........।
यस्तै सास्ती सम्झेर म बेलुका प्रायः हिडेर आँउछु अनामनगरदेखि कपनसम्म । तर बिहान भने माइक्रोको सास्ती चाख्ने गर्छु आफ्नै अल्छीपनका कारण । राजधानी बसेपछि भिडभाडमा यात्रा गर्न अभ्यस्त पनि त भइराख्नु पर्यो नि ।घरछेउमै माइक्रोको अन्तिम बिसौनी भएकोले सीट पाउन त्यति गाह्रो चाँहि छैन । त्यसैले भरसक सास्तीबाट बच्न प्रायः म ड्राइभरसँगैको क्याबिन सिट रोज्ने गर्छु ।....... ......
म त्यो दिन पनि ड्राइभरसँगैको क्याबिन सिटमा बसेको थिए । माइक्रो हिड्नै लागेको थियो । त्यसैबेला अघिल्तिरबाट एउटी युवती आइन्, २५-३० बर्षउमेरकी । अग्ली, खाइलाग्दो ज्यान भएकी ।"वा, क्या दामी माल" युवतीलाई देख्नासाथ उस्तै ज्यान भएको जुल्फे ड्राइभरले साउती स्वरमा भन्यो र घुटुक्क थुक निल्यो । सँगै बसेका अर्का पुरुषले पनि युवतीतिर हेरे ।नीलो पाइन्ट, सेतो र्सट र नीलै कोट लगाएकी ती युवती कुनै अफिसकी जागिरेजस्ती देखिन्थिन् । माइक्रोको ढोकानिरै आएर उनले सोधिन् "सिट छैन?""सिट त छ तर खाली छैन" खलासीले जिस्कायो ।"ओए कान्छा, उहाँलाई मिलाएर हाल्दे" -ड्राइभरले आफन्तजस्तै ठानेर उदारता देखायो, द्धैधअर्थी शब्दमा । म मसुमुसु हाँसेँ ।उनी जसोतसो चढिन् चेप्टिएर । माइक्रो अघि बढ्यो ।...... .......भोलिपल्ट पनि त्यही समयमा माइक्रो बिसौनी पुगे । संयोगवश त्यो दिन पनि त्यही माइक्रोको पालो थियो । सदाझै अघिल्तिरको क्याबिन सिटमा बस्न खोजे । शिशा पुछिरहेको खलासीले मलाई अगाडिको सिट खाली नभएको बतायो । "को छ?” मैले सोधे“। "गुरुजीको मान्छे छ" ड्राइभरहरु बस्ने छेउको होटलतिर देखाउदै उसले भन्यो । पैसा तिरे पनि ड्राइभर खलासीको निगाहमा यात्रा गर्नु यात्रुहरुको बाध्यता हो । प्रतिवाद गर्न साथ अर्को अनिष्टको सामना गर्नु पर्ने हुनसक्थ्यो । त्यसैले म चूपचाप पछिल्लतिरकै सिटमा आएर बसे ।मभन्दा पछि आएका यात्रु पनि अगाडिको क्याबिन सिट खाली देखेपछि त्यही बस्न खोज्थे । तर खलासीले उनीलाई पनि मलाई जसरी नै अगाडिको सिटमा बस्नबाट बन्चित गर्यो ।गाडी हिड्ने समयसम्म पनि उसले अरु कसैलाई बस्न दिएन । पछाडि भरिएर खादाखाद भइसकेको थियो ।गाडी हिँड्ने बेलामा तिनै युवती हतारहतार आइन् अघिल्लो दिनको जसरी । खलासीले उनलाई स-सम्मान क्याबिनको बीचको सिटमा राखिदियो । त्यसपछि अर्की युवतीलाई ढोकापट्टकिको सिटमा ।"ए केटीहरुलाई बस्न दिन पो नदिएको रैछ" यात्रुमध्ये कसैले साउतीको स्वरमा भन्यो ।"यो ड्राइभर खलासीको त जातै नहुने" अर्कोले थप्यो ।अरु मुसुमुसु हासे ।मचाहिँ अधिकांश ड्राइभर खलासीको युवती मोहको कारण के होला भनेर सोच्न लागे ।गाडी गुड्दै गर्दा ड्राइभरले क्यासेट प्लेयर बजाउन खोज्यो तर प्लेयर र क्यासेट दुवै थोत्रो भइसकेका कारण राम्ररी बज्नै मानेनन् ।उसले क्यासेट र प्लेयर दुवैलाई पालैपालो हिर्कायो तर अह“ त्यहाँबाट गीत सङ्गीतको मधुरता निस्केन ।यस्तो थोत्रो क्यासेट पनि के बजाको? बजाए पनि अलि राम्रो क्यासेट बजाउनु नि युवतीले ड्राइभरतिर हेदै आफ्नो असन्तुष्टि पोखिन् ।राम्रो क्यासेट त चोर्दिहाल्छन् के गर्नु? अघिल्तिर सडकमा बिच्छाइरहेका आँखा निमेषभरका लागि युवतीतिर हुत्याउँदै उसले भन्यो "जति किने पनि साध्य हुदैन, एकदिनदेखि दुई दिन ।""पख्नुस् म भोली आउदा ल्याइदिन्छु" -युवती बोलिन् ।तपाईको क्यासेट पसल छ हो र?" ड्राइभरले सोध्यो ।होइन घरमै छ पहिल्यै किनेको । अहिले सिडी बजाउन थालेपछि त्यतिकै थकिएको छ ।""त्यसो भए त म लिन आउछु नि" ड्राइभर अलि चलाख निस्कन खोज्यो । युवतीको अनुहार पुलुक्क हेर्दै उसले भन्यो "सा“च्ची यँहा“ तपाईको घर कँहा हो?""हैन म आफै ल्याइदिन्छु नि" पहिलो प्रश्नको उत्तर नदिई युवतीले भनिन् । मलाई लाग्यो, उनले कागभन्दा कोइली चंख भन्ने उखान चरितार्थ गरिन् ।मेरो उत्रने ठाँउ भइहाल्यो उनीहरुबीचको थप कुराकानी सुन्नै सम्भव भएन ।....... .......त्यसपछिका दिनमा क्याबिनको एउटा सिट उनका लागि सुरक्षित हुनथाल्यो ।यस्तै यात्राका क्रममा एक दिन युवतीले भनिन्- "ग्यास नपाएर साच्चै बिजोग हुने भो ।"तपाईको कुन ग्यास हो?" ड्राइभरले उत्सुकता देखायो ।"एउटा बाबा, एउटा सगर" युवतीले भनिन् "बाबा चाहि पुरै खाली भैरछ । सगर पनि सिद्विन लागेको छ ।"एभरेष्ट भए त मसँग थियो"- ड्राइभरले च्याखे थाप्यो ।"नपाएको बेलामा त जुन भए पनि भइहाल्छ नि" -युवती पनि च्याखेमा लोभिइन् ।"सिद्विएपछि सिलिण्डर सट्टापट्टा गरौला नि त"- ड्राइभर अझै उदार भयो ।"तपाईसँग निकै सिलिण्डर छ कि के हो?" ड्राइभरको पछाडि बसेको मैले उनीहरुको सिलसिला भंग गरें ।"हैन, उहाको लागि चाहि छ" पुलुक्क मतिर हेरेर मुसुक्क हास्दै उसले भन्यो । मानौं, ऊ सिकारीले मृगलाई जालमा पारेजस्तै ती युवतीलाई आफ्नो जालमा पार्न चाहन्छ ।जुँगा चल्यो कुरा बुझ्यो -म चुप भए“ ।उनीहरुले भोलि शनिबार बिहान भेटेर खाली सिलिण्डर र भरी सिलिण्डर साटासाट गर्ने प्रबन्ध मिलाए ।....... ....केही दिनपछि उनीहरु राम्रैसँग जिस्किन थाले, कलेजका अल्लारे केटाकेटीहरु जस्तै । संवेदनशील अंगमा पिटपाट गर्नु सामान्य भयो । खलासीले उनीसँग भाडा समेत लिन छोड्यो ।उनीहरुबीचको उमेर मिल्दो थियो । तर आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिकस्तरमा आकाश जमिनको अन्तर थियो । सामाजिक हैसियतमा मेल हुन सक्ने अवस्था नै थिएन ।तर त्यसलाई उनीहरुले पूर्ण वेवास्ता गरिरहेका थिए । शायद सच्चा प्रेममा यस्तै हुन्छ क्यारे ।उनीहरुबीचको ठट्टा र अत्मीयता हरेक दिन हलक्क हुर्कदै गयो, बर्खाको तामा जस्तै ।मचाहि उनीहरुका चर्तिकलाको रमिते मात्रै बनिरहे । अनि सोच्न थाले“- "त्यो सुशिक्षित जागिरे युवती अल्पशिक्षित जुल्फे ड्राइभरको प्रेममा फसेकै हो?".......... .......त्यस लगत्तै मैले १५-१६ दिनका लागि जिल्लातिर जानु पर्ने भयो । मैले उनीहरुका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न पाइनँ । फर्केर आएपछि माइक्रो यात्राको उही सिलसिला पुन चालु भयो । यात्राका क्रममा अरु सबै परिचित अनुहार थिए । एकैसमयमा अफिस जाने भएकोले नामले नचिने पनि सबैका अनुहार परिचितझै लाग्न थालेका थिए । परिचितहरुको त्यो भीडमा मैले ती दुई अनुहारलाई निकै दिनसम्म खोजे । तर अह, दुवैसँग जम्काभेट भएन । बिहान अफिस जाने बेलामा उसैले हाक्ने गरेको माइक्रो लागेको हुन्थ्यो । तर ड्राइभर अर्कै ।मलाई कौतुहल लाग्न थाल्यो । उनीहरु दुवै जना कहाँ गए होलान्? ड्राइभरले काम छोडेर अन्यत्रको गाडी चलाउन गए पनि युवतीसग त भेट हुनुपर्ने - युवतीले जागिर छोड्ने र ड्राइभरले काम छोड्ने संयोग एकैपटक परेको हो किर? म आफै भित्र घोत्लिरहन्थे ।एकदिन,उसले हाक्ने गरेको माइक्रोको नयाँ ड्राइभरलाई सोधे“- "यो गाडी चलाउने पहिलेको गुरुजी कता जानुभो?""तपाईलाई थाहा छैन, राजन गुरुजीले पहिलेकी स्वास्नी हुदाहुदै दुइटी छोराछोरीकी आमालाई लिएर भाग्यो नि ।"म छक्क परे“। आर्श्चर्यपूर्वक भनेँ "होइन होला ।
""किन नहुनु, अस्तीको हप्ता त्यही काण्डले कपनचौकीमा कत्रो बबाल भयो" छेउमा बसेकी एउटी अधबैंसे महिला बोलिन् । ड्राइभरले मतिर हेरेर बिजयी मुस्कान फ्याँक्यो ।जिज्ञासा मेटाउन मैले सोधे“ "त्यो छोराछोरी छोडेर सौतामाथि जाने चाहि को रैछ?"खै म मान्छे त चिन्दिनँ तर यही कपनचौकी छेउमै घर भएकी रे । सधैं अफिस जादा-आउदा लभ परेको रैछ । उसले त एक महिना पट्याएर टाप ।" ड्राइभरले एकै पटकमा कुरा टुंग्यायो ।मेरो मस्तिस्कमा चाहि सेतो र्सट, नीलो पाइन्ट र नीलो कोट लगाएर अफिस जाने तिनै युवती र जुल्फे ड्राइभर झल्झली आइरहे, आइरहे ।
-मेचीनगर -२, झापा
Posted by डिआर निश्छल at 10:26 PM 1 comment:
इतर इतिहास र गर्भिणी समय
इतर इरिहासले कोरेका
सारा साँध र सिमानाहरू भत्काएर
जन्माउँन खोज्दैछे – एउटा अभिनव समय ।
हेर हुलका हुल आइरहेका आँधिबेहरीहरू
बढारेर लजान खोज्दैछन्
साराका सारा मिथकीय रातहरू
मिथकीय निद्राहरु, मिथकिय घुराइहरू
केही रुपकहरूको संरचनामा
पूर्ण विराम लाग्न खोज्दैछ सदाका लागि
धमिला-धमिला किम्बदन्तीहरूको थुप्रोबाट निस्केर
क्रुर शास्त्रिय विम्बहरु
नाङ्गैफूङ्गै यताउति दौडिरहेका छन्/लुक्न खोजिरहेका छन्
इतर इतिहासले कोरेका
सारा पौराणिक, अपौराणिक श्रीबन्दीहरु फुकालेर
जन्माउँन खोज्दैछे – एउटा अद्वितिय समय ।
अलिकति फुल - निमुखा
अलिकति अबिर – निहत्था
अलिकति अक्षता – बधुवा
शोक सन्तप्तताको भूगोल च्यातेर
समकालीन मष्तिष्कहीन मष्तिष्क विरूद्ध
गर्भिणी छ समय
एकपटक एक क्षणका लागि
टक्क अडिनेछन् घडिका सुइहरू पनि
बज्दाबज्दै रोकिनेछन् मन्दिरका घण्टहरू पनि
टक्क अडिएर हेर्नेछन् नदिनालाहरुले पनि
गर्भिणी समयले जन्माउँदा बखत
समय अन्तिम इन्क्लाबी गीत ।
ए, पहाडहरू हो !
ए, हिमलाहरु हो !
जबरजस्ती गर्भपतन नहोस् फेरि
समयको, समयका कुख्यात व्यापारीहरूबाट
पहरेदारि गरौँ यो समक्रमणकालीन कुरुक्षेत्रमा
सारा साँध र सिमानाहरु भत्काएर
Posted by डिआर निश्छल at 10:01 PM 1 comment:
साच्चै हो र बाबुराम गणतन्त्र आयो अरे
नेपाली जनताहरु माझ उमङ्ग छायो अरे
घर-घरमा गाउ-गाउमा बिकाशको नारा बोकी
जनताले आटेको नयाँ नेपाल भयो अरे
बाबु बिनाको टुहुरा बालक आमाको सहारा
लिदै रुने बिचरा त्यो बल्ल गीत गायो अरे
डर्,त्रास र धम्कीको भरमा बाचेको मान्छे
आज आँफै निडर भै अधिकार माग्यो अरे
सबैको हाई-हाई प्रचन्ड र बाबुराम
पटुकी कस्नेले पनि आज पेट भरि खायो अरे
Posted by डिआर निश्छल at 9:44 PM 1 comment:
सुम्सुमाउदा नेपाल तिमिलाई
तिम्रो मुल्यवान तनभरी
बगेका मेरा अमुल्य पसिनाका धाराहरू
खहरे खोला बनि सुकेर नजावस
तिम्रो काखमाथी मिठो निद शैयामा
देखेका लाखौ सुनौला सपनाहरु
हुरी बतास संगै उडेर नजावस
माधक तिम्रो उष्ण मोहपास भित्र
छल्किएका छाल झैं जवानीहरू
त्यों मोहिनि साथको बिछोडमा
ज्वालामुखि बनि फुटेर नजावस
मेरो जन्मभुमिमा पाईला पाईला गनी
तय गरेका कोसौं जीवनका दूरिहरु
लक्ष्य बिहिन चंगा बनि चुडेर नजावस
तिम्रो कण कणमा मिसाउदा
तिम्रा हत्केला भरि बिसाउदा
कबिका दुःखान्त कबिताले
मस्तिस्क भरि गिज्याउदा
सधा चुपचाप स्थिर रहने कस्तो
रित्तो रित्तो तिम्रो मन
पिरोल्दैन बियोगले किन तिमीलाई
गर्जिदिन्छौ हरक्षण नियमित बर्सिदिन्छौ
अनि जताततै पड्किदिन्छौ
कसम छ तिमीलाई बगेका ती पसिनाको
र धेरै सुनौला सपनाहरुको
बिदाईका अन्तिम समर्पण संगै बितेका साथलाई
एक पटक सुम्सुमाउदा नेपाल तिमीलाई ।
Posted by डिआर निश्छल at 8:28 PM 1 comment:
कार्यालय जान सुरु गरेको केही दिन पछि नै हाकिम साहेबलाई भर्याङ चढ्न गाह्रो लाग्न थाल्यो । माथिल्लो तलामा रहेको आफ्नो कोठामा पुग्न साँघुरो त्यो पनि घुमाउरो भर्याङ फन्फनी घुम्दै चढ्नु पर्दथ्यो । कोठामा पुगे पछि भेट्न आउने हरेकलाई आफ्नो साहसिक भर्याङ यात्राको बर्णन सुनाउने गर्नु हुन्थ्यो । नसुनाउनु पनि किन उहाँ आफै पनि सफलताको खुड्किलो चढ्दै त्यत्रो ठूलो पदमा पुग्नु भएको होईन । बर्षैसम्म सडकमा भौतारिरहेको बेला कसैले टपक्क टिपेर घुम्ने कुर्सीमा बसाइदिएको थियो । त्यसो त सडकमै हुँदा पनि उहाँ जहिले पनि छोटो र चोर बाटो हिड्ने गर्नु हुन्थ्यो । उहाँलाई जान्नेहरु भन्छन् -त्यसैको प्रतिफल नै हो यति छिटै उहाँ उक्त पदमा विराजमान हुनुभएको ।
उसो त उहाँलाई भुइँतलाको कोठामा सर्न मन नलागेको पनि होइन । तल्लो कोठामा आफू र माथिल्लो कोठामा आफूभन्दा साना तहका कर्मचारी सार्ने विचार गर्नुभएको थियो एक पटक । आफ्नै शीरमाथिको कोठामा आफू भन्दा साना तहका कर्मचारीहरु कसरी राख्नु ? फेरी दिनभर आफ्नै टाउको माथि ति कर्मचारीहरुको जुत्ताको टक् टक् सुन्नु पर्ला भनेर दिक्क हुनुभयो । जे भए पनि सरौं न त भन्दा आफू अघिका हाकिमहरुले यसो नगरेकोले यस्तो निर्णय लिन सकिहाल्नु भएन । आफूलाई यो अवस्थामा पाउँदा उहाँ निकै चिन्तित हुनभयो ।
हाकिमको चिन्तित मुद्रा देखेर कमाउ धन्दामा सिपालु केही कर्मचारीहरु एका-एक खुशी भए । उनीहरुले कार्यालयलाई समयानुकुल आधुनिकिकरण गर्दै लैजानु पर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने कमिशन लगायतका अन्य फाईदाका कुराहरु हाकिमलाई बुझाए । हाकिमलाई त्यो कुरा साह्रै चित्त बुझ्यो ।
त्यसपछि कार्यालयलाई समयानुकुल आधुनिकिकरण गर्ने नाममा प्रथम चरणमा कार्यालयमा लिफ्ट ( स्वचालित भर्याङ ) जडान गरियो । लिफ्टको प्रयोगले त्यस कार्यालयका कर्मचारीहरुमा परिवर्तन देखापर्न थाल्यो । घुमाउरो तथा साँघुरो त्यो झन्झटिलो भर्याङ चढ्नु भन्दा लिफ्ट चढेर सिधै माथि हाकिमकहाँ छिन्- छिनमा पुग्नु छिटो छरीतो र आनन्ददायी लाग्न थाल्यो उनीहरुलाई ।
त्यसपछि अधिकांश कर्मचारीहरु लिफ्ट प्रयोग गर्नमा होडबाजी गर्न थाले । अधिकांश समय उनीहरु माथिल्लो तलामा रहेको हाकिमकै कोठा र ढोका वरपर बारम्बार देखिन्थे । केही समयपछि लिफ्ट प्रयोग गर्न सिपालु कर्मचारीहरुमा झन् ठूल-ठूला परिवर्तन देखिन थाल्यो । उनीहरुको पद, पैसा र पहुँच एकाएक बढ्न थाल्यो । तर लिफ्ट चढ्न डराउने तथा परम्परागत भर्याङ प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरु चाहीँ उही पद र अवस्थामा थिए । आफ्नो यो अवस्था देखेर उनीहरु निराश भए । त्यसपछि उनीहरु हाकिमका सामु गएर लिफ्टको बिरोध गरे । ?समयानुकुल परिवर्तन हुन नसक्ने बज्र स्वाँठ? भन्दै हाकिमले उनीहरुलाई बेस्सरी झपारे । बिचराहरु लुखुर-लुखुर पुनः उही पुरानो भर्याङ हुँदै तल उत्रे ।
Posted by डिआर निश्छल at 8:23 PM 1 comment:
म तिम्रो सपूत
म जन्मँदा बाबा, पहिलो मुस्कान
तिम्रो मुहारमा थियो रे !
छोरा छोरा भन्ने समाजमा,
तिमीलाई छोरीको चाहा थियो रे !
पारस्परिक यो मण्डलीमा
रोज्यौ छोरीलाई नै सुत
तिम्रो सपना मसँगै जन्मिए
तर रिक्त, म तिम्रो सपूत !
“तँ छोरी होस् मात्र छोरी”
एउटा छोरी भएर पनि भन्छिन् आमा
“पढ्न सक्दिन छोरीले” भन्छन्
भाइलाई डाक्टर बनाउने रे मामा
भन्नेले भन्दै गरे तर साथ दियौ
तिमीले बेची पसिना
आज अन्जानमा के बिराएछु ?
बन्न सकिन, म तिम्रो सपूत !
एकक्षण त्यो मेरो वालापनको
हन्हनी जरो आएको रात
मैनमवत्ति बाली, निदारमा
पानिपट्टी लगाउने त्यो तिम्रो हात
प्रश्वास बनी अँगाल्यौ मलाई
दुखेथ्यो जब चर्केर आँत
आँसु पिई बाँचिरहेछु
लाचार आज, म तिम्रो सपूत !
न हेर्न सक्छु तिम्रो ती
कलेटि परेका ओठ
न सहन सक्छु तिम्रो त्यो
पाउमा लागेका चोट
विवश भएछु बाबा, म !
सजिव भएर पनि सदा मृत
तिम्रो अस्तित्वको प्रतिबिम्ब,
भएछु नासी, म तिम्रो सपूत !
-काठमान्डु -७ गौरीनगर ,चाबहिल
Posted by डिआर निश्छल at 7:22 PM 1 comment:
सक्छौ भने सजाएर राख मलाइ आँखा भरी
गाउँछौ भने गीत सँगै गुन्गुनाउ भाका भरी
चाहान्छौ की हाँसिरहुँ झुमिरहुँ तिमी सँगै
उसोभए फुलाउ मलाई गुराँस जस्तै पाखा भरी
तिम्रो सम्झनामा अझै जिवीत राख्ने चाह भए
सक मलाई अटाउन आफ्नो दिलको खाका भरी
सधैं सधैं याद राख्ने ईच्छा ब्यक्त गर्छौ भने
सक बरु बार लाउन जाने मेरो नाका भरी
Posted by डिआर निश्छल at 6:56 PM 1 comment:
जस्तै बिधवाको सेतो सारी
मद होसी लिएर रातै भरि
उनी आउछिन् सपनीमा ।
हिमाल जस्तै कन्चन दन्त लहर
गुलाब जस्तै मस्त यौबन
स्पर्समै स्खलित हुन्छु जस्तो......
आकर्षक सुडौल उनको नितम्ब
बस् यति मत्र उनको परिचय।
कहिले हामी भेट्छौ चोमोलुङमाको फेदीमा
कहिले हामी नाच्छौ नागी र खर्कहरुमा
कहिले हामी तैरिन्छौ काबेली तमोरमा
कहिले हामी रम्छौ फक्ताङ्लुङ् दरबारमा ।
कैयौ पटक सुहाग रातको अनुभबमा
उनी माझ म स्खलित् भएको छु
मेरो ओठ टोकेकी छिन् उनले कैयौ पटक्
मैले नि उनलाई चुमेकोछु कैयौ पटक ।
हावाले उडाउछ जब उनको सारी
सारी झै सेतो नितम्ब देख्छु म
आक्रोस् पोख्छु हावा सित,
थुक्क! लाजै बेगर.....
अङ्ग प्रत्यङ्ग स्पर्स गर्ने हावा?
फिकर नै बेगर सारी सुर्काउने...
छि... बैसले मात्तिएको हावा?
सबैको प्रश्न? आखिर को हुन् उनी??
कोही भन्छन् कामुक द्रौपदी,
कोही भन्छन् मोनिका लेविन्स्काई ,
कोही भन्छन् होइन पिङ्गला मेनका,
तर सत्य यत्ति हो.....
म पान्डप होइन,
न त वील क्लिन्टन नै हु ,
न त हु बिस्वामित्र
उनी सपनाकी मेरी राज कुमारी ।
Posted by डिआर निश्छल at 4:08 AM No comments:
बन्चरोले ठूगूँ लागिरहेको घुच्चुक
कत्ति पनि बुझ्न नसकिरहेको राष्ट्रीयता
पहेँलो जमराले किन मेरो मन तानिरहेको ?
घुस्न किन नसकेको म ?
भीड़ छिचोलेर मन्चसम्म
निशुल्क सडक नाटकमा,
बन्चरोले ठूगूँ लागिरहेको घुच्चुक ।
यो छातीले पहाडको सिरानी लगाएर
हेरिरहेछु समुद्रको पन्ना
बन्चरोले ठूगूँ लागिरहेछ घुच्चुक ।
ममाथि शासन गर्ने को श ?
त्यो जसको बुद्धि बाहिर डुल्न गएको छ ?
रगतले बगूँ लागिरहेको देश ।
बिम्बित अक्षर यस्तो धङधङ्गी ता
मेरो पागलपन पनि
Posted by डिआर निश्छल at 3:52 AM No comments:
शीतको थोपा उडिगयो, बिहानीका घाम संगै
मेरो नाउँ जोडिएला, फेरि तिम्रो नाम सँगै ।
बोटहरु नाङ्गा भए, बाग फेरी उजाड भयो
फुलेका ती फूलहरु, झरिगए यामसँगै ।
मलाई कायल बनाइसके, रोइ रोइ यी आँखाले
तिमीलाई खोज्ने आँखा पठाउँ कि खामसँगै ।
जिन्दगीको एउटै पङ्ति , धेरै लामो हुदोरैछ
रोकिदिउकी आफैलाई, एउटा पूर्णविराम सँगै ।
हुलबाटै टाढा हुन मन लाग्छ कैलेकाही
तरै लाग्नुपर्दो रैछ,मानिसका लाम संगै ।
Posted by डिआर निश्छल at 3:45 AM No comments:
-दिलिप राई 'सगर'
गीत बनाई तिमीलाई ,लेखू-लेखू लागिरहेछ
एक छिन भए नि कहा, भेटू-भेटू लागिरहेछ
यों कस्तो खुलदुली हो, कस्तो छटपटी हो
एक दिन नभेटे नि , देखू-देखू लागिरहेछ
यों कस्तो तिर्सना हो, कस्तो गाढा सम्झना हो
सधै तिमी हिड्ने बाटो ,छेकू-छेकू लागिरहेछ
म छेउ अईदेऊ तिमी, साथी भईदेऊ जून बनी
केश खुल्ला देख्दा फूल, फ्याकू-फ्याकू लागिरहेछ
रात पनि दिन बन्थे , तिमी पाए धन्य हुन्थे
झरना सम्झी मनको तिर्खा, मेटू -मेटू लागिरहेछ
-उर्लाबारी ४/२५३ ,मोरंग
Posted by डिआर निश्छल at 1:24 AM No comments:
छुपाई यो मनको कुरा,तिमीसामु पोखिन
आफ्नो सम्झी भुल गरेछु,पराई किन सोचिन
दोधार पर्थे तिमीसङ्ग्,खोल्न पनि गथासो
चाहे मैले तिमीलाई,भाग्यसङ्ग जोखिन
छोडी जाने समयलाई,ख्याल गर्न सकिन
अतित सारा बिर्सु भन्छु,सम्झिन झन् छोडिन
पोखु मर्म कस्लाई म,तिमी थियौ भरोसा
दुखियाको दुख्छ मन,म कहिल्यै चोखिन
कस्तो होला म विनाको,सुनौलो त्यो सफर
टोलाइ रहे क्षितिजसम्म,मुहार मैले छोपिन
Posted by डिआर निश्छल at 10:23 PM No comments:
U 13 को ryapid बसबाट केएल आउँदै थिए। केपोङ जस्को मार्केट अगाडिबाट एक अफ्रिकन महिला बसमा उक्लिन । उन्को साथमा केही गह्रुङो समान बोरा थियो। भित्र प्याक गरिएको उक्त समान कुनै मेशिनको पार्ट पुर्जा जस्तो अनुमान लगाए । मैले गह्रु पाराले उचालेर ढोका छेवैको सिट मुनी राखीं । त्यहा दुइवटा सिट मध्य एउटा सिट खालिनै थियो । अर्कोमा चाइनिज अधबैसे पुरुष बसिरहेको थियो । ति महिला त्यही खाली सिट्मा बस्न के आटेकी थिइन त्यो पुरुष ले पछाडि बस्ने सङ्केत दियो । मैले तत्काल के सोचे भने ति सभ्य भनाउदो पुरुषले छुवा छुत को ब्याबहार गरिरहेको छ तर समान गह्रुगो भएको प्रष्ट्याउदै ती महिला त्यही सिट्मा थ्याच्छ बसीं। सभ्यपुरुश् ले नाक खुम्च्यौदै झ्यालतिर अनुहार मोड्यो ।
बस अगाडि बढन थाल्यो । केही मिनेट पछि त्यो सभ्य पुरुष जुरुक्क उठ्यो र जबर्जस्ती त्यो सिट छाड्दै महिलाको टाउको माथि प्याच्च थुकिदियो र फाटाफट् गएर पछाडिको सिट्मा बस्यो। ती महिलाले प्रतिकृया स्वरुप गाली मात्र गरिन "तँ मर्ने बेलामा राम्रो सँग मर्दैनस र स्वर्ग पनि जादैनस भगवानले हेरिरहेको छ। "उन्ले भगवानको नाम पुकारीन । मन्मनै सोचे- महिला हुनुको पिडा स्पस्टै देखियो । यदि ती अबला नारीको ठाउमा कुनै पुरुष भैइदिएको भए त्यो सभ्य पुरुषले थप्पड खाने निस्चित थियो । यी आँखैअगाडिको दृश्य बस भित्रका यात्राु हरुले रमित मानेर हेरिरहेका थिए । कसैले प्रत्यक्ष प्रतिकृया जनाएनन। बस आफ्नै गतिमा अगाडि बढीरह्यो । मेरो मनमा ती महिला प्रति एक किसिमको सहानुभूति त पलाएको हो तर म आफै पनि कम्जोरी भएको कारण केही गर्न र भन्न सकिन । अन्तरराष्ट्रिय संधि सम्झौताले जातिय भेद भाब र छुवा छुत हटाएपनी ब्याबहारमा यो जीबितै रहेछ भन्नेलाग्यो । आफ्नै मुलुक अफ्रिकी राष्ट्रहरुमा जातिय भेद भाब भोग्दै अैरहेको यी काला जाती हरुले बिदेशमा पनि भोग्नु पर्दाको अन्तर्पिडा नजिक बाट महसुश गरे। मैले नेपालका दलित हरुलाई सम्झे मुलुकी ऐन मार्फत ४२ बर्ष भन्दा अघि अछुत प्रथा बन्द भएकोलाई मुक्ती दिबश भनेर मनाउन थालिए पनि आज सम्म मुलुकका अधिकाङ्स ठाउमा अछुत् को अछुत्तै छन मन् भरी यस्तै कुराहरु खेलिरह्यो । बस बातुलीमा भन्ने ठाउमा रोकियो । ती महिला ओर्लिन तर उन्को टाउकोमा बाधिराखेको पछ्येउरामा अझै पनि थुक टल्की रहेको थियो ।
Posted by डिआर निश्छल at 10:27 PM No comments:
प्रेमको दुखाइमा मिठो अनुभूति
जित त उसैको हुनु थियो, भयो हार त मेरो पेवा नै हो। जित्ने बाजीमा पटक पटक हारेको मेरो प्रेम कथासमाबेश गर्ने प्रयासमा छु।
नमस्ते पाठक बृन्द् , मेरो उमेरको सुर्योदय हुनु अघि नै शैशब शखी बनेर आशमाया म सङ्ग आई। त्यस्ती थिई आशमाया, मिर्मिरेप्रभातमा अन्तुको घमाइलो अरुनिमा भन्दा सुन्दर।कालीमाको अर्थ पुर्ण नरम काली केश्रशिहरु, हिउ पोतिएका कोमल मुहार,गुलाब जेलिएका ती पातली युगल ओठ। शृङ्खलाबद्द मिलेका मोतीका दन्तहरु। कतै खोट नदेखिएकी नभेटिएकी दुर्लभ सौन्दर्यवती आशमाया। जस्ले मेरो पाईलाहरु पछ्याई। हामी बाच्दै आयौ ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गा भएर। समयको रफ्तार सङ्गै शारिरीक बनावट पनि हुर्किएछ, जवानीको रुप रेखामा परिबर्तन भयौ हामी दुबै। हामीले सर्बस्व सुखहरु पायौ त्यस अबधीमा। हामी सम्पन्न भयौ खुशीहरुको। हुन मेरै अघि थुप्रै थुप्रै अफर हरु आए आशमायाको लागि। पराधिन भनेर जान्दा जान्दै पनि राम्रो चिज् लुट्न लाज मान्दैनन् मान्छेहरु। आशमायाले ती सब अस्वीकारी। जसबाट आशमाया सुख स्वर्ग र ऐस्वर्यको बेगम बन्न सक्थी। तर पनि त्यस्ले कुनै पर्बहा राखिइन त्यस्को। सङ्गैको उठ बसमा एकदिन छुट्टिने बियोग आयो। बिबश आशमाया शहर गई अध्यायनको लागि। त्यो बेला महशुस भयो आशमाया सङ्गको बिछोडमा मनहरु कति बिरक्तिएछ।त्यत्रो बिधि ठुलो सन्सार् पनि साघुरिएर अटेस मटेस भएर बाचे झै भान भयो। म पखेरु खन्दा खन्दा थाकेर हैरान हुन्थे। सधै सधै त्यसरी थाक्दा मेरो कपाल आफ्नो काखमा राखेर सुम्सुम्याइदिन्थी। ती गजबको पलहरु सम्झना गर्दा म भाबुक र उदश हुन्थे। निलाम्य गगन माथि सेता बकुल्लाहरुको उडान देख्दा एउटा निर्दिश्ट अभिप्रायको यात्रु झै लाग्थो जीबन।स्वाश बिनाको बन्द कोठा बन्यो मेरो धर्ती। तर कष्टका त्यति धेरै दिन हरु बिताउन परेन। आशमाया तुरुन्त आएर बिछोडका तिक्त अनुभूतिहरु पोखी म मा। आशमायाले कौतुहलता प्रस्तुत गरी, आखिर किन एउटै आभाष हुन्छ हामी दुबैमा? बास्तबमा हामीले बुझ्न नसकेको त्यो एक बेलाको मिठो प्रेम थिएछ। आशमाया फेरि फर्कनु थियो, मलाई साथै लैजान खुब हत्ते गरी, कर गरी, र केटा केटीलाइ झै फकाई-सानो तिनो काम खोजेर हामी दुबैले धेरै थोरै पैसा कमाउनु पर्छ। तर म असहमत भए। तर उसले अझ जिद्दी गर्दै भनी-" म कमाउछु तिमी मेरो कोठामा पर्खेर बसिदिए मात्र पुग्छ।" मैले भने-'हुदैन।'केही नलागेर उसले मलाई तानी, घिसारी, रोई, कराई मलाई साथै लैजान नपाएर। मैले ती सब कृयाकलापहरुको अस्वीकार् गरे कि मैले त्यहि गर्नु थियो। जानु पुर्ब रुदै भनी-'पछि यी एक- एक पल हरु सम्झेर नपछुताउनु।' अनि उ झट्टारिएर गई त्यहा बाट भने म मुख दर्शक भएर मुर्तिवत् हेरीरहे। म सङ्ग असिमैइच्छाहरु हुदा हुदै त्यति मायालु प्रस्ताबहरु स्वीकारेर आशमायालाई पछ्याउन सकिन। आशमाया मेरी प्राण हो, ढुकढुकी हो, जो मेरो हृदय गतिमा सकृय बनी दिन्छे पलपल। तर म भित्रको बिबशता निश्थुर छ। म उसको बन्धनमा छु। मन मनै भने मैले- आशमाया तिमीलाई मेरो बिबशता फुकाएर देखाउन असमर्थ छु ।
यसबेला.......... त्यसपछि आशमाया कहिल्य फर्केर आईन। मैले धेरै पत्र हरु कोरे,फोने हरु उतिकै गरे, तर प्रतिकृया केही पाइन, प्रेम पिरतीको कुरा न हो खुशाउन मात्र कहा हुन्छ? रिसाउनु पनि त हुन्छ, सायद मेरो अस्वीकारको रीसले फुल्लिएकी हुदिहो, आफ्नो मायालु प्रस्ताबहरु इन्कार भएकोमा दिल दुखाएकी हुदिहो, प्रेम पिरतीमा प्रणयकोप उतिकै हुन्छ। म तुरुन्तै गएर उनको सामु रुदै माफ माग्न पनि सकिन, बरु मर्माहत् भएरप्रतिक्षामा धेरै महिना हरु फटाए। अरु क्रमश खोलाहरु बगेर दिनहरु संगै समुन्द्र भेटिसके, सायद् कयौ यामहरु बदलिए पटक्-पटक्, तर सन्चै आशमाया फर्केर आईन। फेरि एउटा तुषार बृष्टीको याम आयो शरदहरुलाइ नष्ट गर्दै, मनभरिका कल्पना समेत ठिहीले खाएछ।
.......... त्यस पछि आफ्नै निर्णयमा झोला बोकेर बयस्क माता पितालाई रेखाको साथ छाडी शहर पसे। किनकि आशमायाको अनुपस्थितिमा दुखेको घाउलाइ त्यहा गएर मलम पट्टी गर्नु थियो, ठेगानाको भरमा म त्यहा पुगे। आशमाया, जसलाई हेर्न मुटुको गति असन्तुलन थियो। उसको ढोका जो खुल्न बित्तीकै म मेरी आशमायालाई देख्न सक्छु। मैले बाहिर बाटै बोलाए पछि एउटी केटी आई को हो भन्दै, कपाल खैरो र अर्धनग्न बस्त्र जस्ले आदिम युग र सस्कृति उपर चुनौती प्रस्तुत गरेको भान हुन्थ्यो। मैले भने- 'आशमाया छैन र यो कोठामा?' त्यो केटी खित्खिताएर हास्दै भनी 'अनि म को हु त? तिमी आशमन हैन? बुढो भैसकेछौ आशमन तिमी।' म छक्क परे। आशमायाले मलाई आफै सङ्ग भित्र लगी, आशमाया त बुथुरी भैछे, मगमग बास्ना आउने फूल् जस्तै र बोली पिच्छे अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्ने भैछे।उसले गाउघरको बारेमा झार पात सम्म केलाएर अनेक सोधी। हुन पनि निक्कै परिबर्तन भएको छ गाउ घरमा आजकल। पिउने पानीको धारा घर घरमा आयो, राणा ज्युले गाउमै मिल राखेको छ, ल्याम्प पोस्ट हरु धमाधम थड्याउदैछ, आधा बस्तीहरु त बिजुली बालेर झलमल्ल भैसक्यो। घर्ती बाजे र कुतुनी बजुको एक हप्ताको हेरफेरमा देहान्त भयो।राम भाइको बिहे भएर पनि छोरी जन्मेको छ। सन्तेको स्वास्नी तिलाघरे सङ्ग पोईला गैइ।समयको दौडानमा मान्छे हरुको भाबभङी यस्तै छ'- मैले सबै बताए भने उसले चाख मानेर सुनिरही।
खाना खाए पछि सुत्ने बेलामा उनी गूडनाईट भनेर सुत्न अर्को कोठमा गई। जसलाई यो भन्दा पहिले बालाकाल देखि मेरो अङ्गालोमा शिर राखेर नसुते निन्द्रा नलाग्ने किन आज अर्कै कोठामा सुत्न ग ई? आखिर पबित्र प्रेमम के नै त्यस्तो बिगार हुन्छ र? मलाई असह्य भयो र मैले उसलाई उसको कोठा बाट तानेर ल्याए र आफ्नो अङ्गालोमा कसेर उसको गाला भरि चुमिदिए। तर त्यस्ले आपत्ति प्रस्तुत गरी।'यो के गरेको,आशु? भनेर पन्छिन खोजी। तर म कहा सजिलै उम्किन दिन्छु उसलाई। किनकि उसलाई नपाएर म त्यति टाढा देखि यहा सम्म आएकोथे। त्यसले बल गरी भने,मैले उसलाई उम्कन नदिने चेष्टामा समात्ने हुदा अचानक मेरो हात उनको छातीमा थुरिन पुग्यो। तब त्यो भुइमा बसेर सुक-सुक गर्दै रोई भने बाहिर बाट दुई जना केटीहरु आए। तिनीहरु आएपछि झन रुन थाली आशमाया।मैले शन्देह पन्छाउन लाइ भने-'केहि भएको छैन'। त्यसपछि तिनीहरुले आशमायालाई लिएर गए। मलाई रातभर निन्द्रा लागेन। भोलि बिहन आशमाया चिया लिएर उपस्थित भैइ, तर केहि बोलिन, उसको पछदि शशी भन्ने केटी पनि थिई। मैले सरी भनेर कान समाए साथै उठ्बस पनि गरे।'आशमाया, मेरो मनमा रति छैन पाप कुकर्मको, मलाई तिमी सित मिठो बातमा रात कटाउन मात्र थियो।' तब उनको पछाडि उभिएकीशशीले प्रतिकार गरी-'एउटा जवान केटा र केटी कसरी एउटै बिछ्याउनामा रात कटाउन मात्र सक्छ?' तब मैले भने कठोर प्रतिबादमा-'त्यो भ्रम हो,शशी।हामी गाउलेहरु त्यस्तो हुदैनौ। हाम्रो समाज धेरै शभ्य छ, धेरै महान छ। शशीले बिचैमा कुरा काटी-'ए त्यसो भए तिमीहरुको समाजमा अबिबाहित नारी पुरुषहरु एउटै बिछ्याउनामा सुतेर रात कटाउने चलन पनि छ? 'तब मेरो मुख बन्द भयो। अब भने मेरो आखा तलाउ भएछ मोतीहरुको। यो देखेर आशमायाले मेरो कपाल सुम्सुम्याउदै भनी-'आज मैले नगरकोट घुम्न जाने प्लान बनाएकी छु। तर मलाई अब त्यहा एकछिन बस्नु थिएन त्यो अनादरको भिडमा तमसा भएर।मैले झोला बोकेर बिदा माग्दै भने-'अब तिम्रो नगर्कोट जाने प्लान तिमी सितै राखेर मलाई बिदा देउ।' तर त्यस्ले मेरो बाटो छेकी र भनी-'आज म तिमी सङ्गै गफ गरेर रात कटाई दिन्छु।त्यतीले नभएर त्यस्ले ढोका पनि लगाई। रोई आशमाया। मैले परबाह गरिन।तब शशी बस चढाउन सम्म आई। बस चढाएर भनी-'सोझो मान्छे,मलाई थाहा छ तिम्रो नादानी बहुत माया लाग्दो छ। यदि मेरो कुराले तिम्रो दिल दुखेको छ भने तिम्रै भलाइ कै लागि भन्दैछु। अब असिमको भाग्य बाट पर जाऊ। उनको बिबाह एउटा चरचित मोडेल केटा सङ्ग हुदैछ र ऊ सङ्ग असङ्ख्य सुख सवारीका साधनहरु छन्। अब यो शौभाग्यको बिछ्यौनामा उसलाई खुशी साथ निदाउन देऊ।' तब म शुन्य भए। मैले भने-'शशी, यदि यो सत्य हो भने म भित्रको बुद्धको किरिया खाएर भन्छु। आशमायाले रोजेको शौभाग्य प्रति मलाई गर्ब छ। अब म उसको मनको दरबार बाट बसाइ सरिदिन्छु। रुनु त मैले पर्ने हो तर त्यसले आशु पुछी।गाउ फर्कदा थाहा भयो आशमायाको बिबाहको कुरा छिनेर घरमा निम्तो पनि आइसके रहेछ। घरको सज्जावट् गर्ने जिम्मेवरी म मा पनि परेको रहेछ। रेखाले मेरो अनुहारमा त्यस्तो के पाई कुन्नि नियालेर हेरी खुब,अनि मात्र भनी- 'लेखक भनाउदाहरु कहिल्यै सुखी हुदैनन्।' हामीले उनको घर झिलिमिली पारेर सजाइदियौ।अनि प्रतिक्षाको आतुर घडिहरु सङ्गै पजेरोमा आई आशमाया। गाउलेहरुले स्वागत गरे भने मैले शशीले भनेझै त्यहा जानु थिएन त्यो बेला।हो, उनको शौभाग्यको बिछ्यौनामा मैले काडा बन्न हुदैन। अन्तमा आशमायाले सिन्दुर पाई, चुरा पाई,पोते अलङ्कार पाई, सुहाउदो जोडी पाई।अनि आफु अन्मिनु अघि मलाई भेट्न आई।मैले आफ्नो आखाले पचाउन नसकेको आशु पुछ्दै भने-'बधाई छ।' उसले हास्दै भनी-'किन रोएको?' मैले सहजताका साथ भने-' म पछुताएर रोएको होइन। एउटा खुशी ,एउटा अशिम् हर्शले हो। यो सुखको उत्सबमा सुदुर प्रान्त बाट उर्लन्दै आएको समुन्द्रको भन्दा नुनिलो पानी, यदि आशु नै हो त यस्को कुनै अस्तित्व छैन। भाबबिभोर शब्दहरुको गोता पाई को कसो आशमाया अलिक भाबुक देखा परी।त्यस पछि अन्मिएर गई आशमाया गाउबाट।
म एकान्तबासी भए। निर्जन प्रेमी भए। धेरै भएछ पान्डुलिपि लेख्नलाई कलम नसमाएको। किनकि लेखेको कथा आहा कति राम्रो भन्ने आशमाया नभएर पनि हुदो हो। यस पटक भने कथाको बिसयबस्तु खोजी राख्न परेन। किनकि म आफैमा करुण कथा थिए। आफैमा बिभत्स कहानी थिए।कपी र कलम रेखा बाटै प्राप्त भयो। थप प्रेरणा र उत्साह पनि। त्यो केटी अत्यन्त सरल र सरस छे।उ पहाड बाट यहा पढ्न आएकी हो।यही बस्छे।पढ्छे। घरि घरि त म सङ्ग बाद बिबादमा नारिएर खुब झोक पनि चलाउछे। तर त्यतिकै मायालु पनि छे। बिच-बिचमा चिया चमेना र फुर्सदमा हाड बजार गर्न पनि सघाउछे। र पान्डुलिपि पनि सिद्दिएछ।त्यस्ले सक्न बित्तिकै हेर्न मागी र मैले दिए।
आशमाया एक बिहाननै आएर मेरो शिर फालिदिदै भनि-'आशमन दाइ, म घर फर्कदै छु।' एका बिहाननै यस्तो कुराले भने निकै मन बिझाए झै भयो। मैले सोधे-' किन?' उसले भनी-'किन भन्नु र? मेरो बिहेको कुरा छिनियो अरे।' किन किन म यो पटक भने अत्यन्त शिथिल भए। त्यस्ले भनी-'जाने बेला मलाई तपाईको चिनो दिनुहुन्न?' फोटो लैजाउ भन्न नपाउदै उसले भनी-' हजुरको लेख पान्डुलिपि।' मैले बुझे-त्यो अर्टिकल पधेर रोएकी थिई। मैले त्यो पनि दिए। त्यसपछि त्यस्ले सुसुप्त स्वरमा भनी-'काही कतै दुखाएको छु भने क्षमा प्रार्थी छु,अस्मन् दाइ।' त्यो जान लाई उठी भने म त्यसलाई पुर्याउन अलिक पर सम्म गए।मैले छुट्ने बेला भने-"सुखमय होस् तिम्रो दाम्पत्य जीबन्" त्यस्ले बर्बर् आशु बगाई। मैले उसको हात समएर भने-'रेखा।।। '।तर त्यस्ले हात छुताउदै भनी-'अबेर भायो।' अनि त्यो गैइ।हेर्दा हेर्दै कति खेर ओझेल परी। त्यो उनको चरन्यास र प्रतिबिम्ब मात्र बाकी रह्यो कही काही गोरेटोमा। तितो पिरो पिडाले खुम्चिएर पनि मिठो दुख्यो यि सब अनुभूतिहरु। तर मेरो रुखो र अनाबृष्ट आखाले किन्चित् एक थोपा आशु सम्म झारेन।
-बसाहा -१, उदयपुर
Posted by डिआर निश्छल at 10:02 PM No comments:
रहर नै नभएको, कुनै रहर नै नपाल्ने मानिस संसारमा कोही होला कि ? केही रहर नबोक्ने, कस्तै रहर नसाँच्ने, कत्ति पनि रहर नपाल्ने, कहिल्यै नरहराउने मानिस कोही होला कि ? यस्तो रुमानी कल्पनामा हठात् डुबुल्की मार्दा पनि मन पुलकित भएर आउँछ, हृदय रोमाञ्चित भएर जाग्छ । किनभने जम्माजम्मी तीन अक्षर मिलेर बनेको रहर शब्द उच्चारण गर्दा जति मीठो लाग्छ, सुन्दा उत्ति नै प्यारो अनुभूत हुन्छ । यो आफैँमा सरल छ, सपाट छ, सुस्पष्ट छ । यसको सरलताभित्र शब्द गाम्भीर्य लुकेको छ, भाव गाम्भीर्य भरिएको छ, स्वर माधुर्य पनि छ र श्रुति माधुर्य पनि । यो सुन्दर छ, शान्त छ, रसिलो छ, भरिलो छ, चिटिक्क छ । आकारमा सानो भइकन पनि रहरले आफूभित्र अथाह सम्भावनाका मूलहरू समेटेको छ ।
तपाईं रहरलाई एक नामले होइन, अनेक नामहरूले बोलाउन सक्नुहुन्छ । व्याकरण र भाषाशास्त्रीहरूको लबजमा जसलाई पर्यायवाची भन्न सकिन्छ अर्थात् इख, धोको, मन, तृष्णा, इच्छा, आकाङ्क्षा, महìवाकाङ्क्षा, सपना, जपना आदि जे भन्नुहोस्, यी सबै रहरकै एक वा अर्को स्वरूप हुन् । आत्मा एउटै हो, आवरण पृथक् हो । सार एउटै हो, रूप अलग हो । प्रकृति समान हो, मौसम फरक हो । वृक्ष एउटै हो, शाखा प्रशाखा पृथक प्रतीत भएका मात्र हुन् ।
मानिसमा अनेक रहर हुन्छन् । एकाध ज्ञानी महात्मा र महापुरुषको अपवाद छाडीदिउँ, अन्यथा सबै मानिसमा तीन आधारभूत रहर हुन्छन् । स्त्रीलाई पुरुष र पुरुषलाई स्त्रीको रूपमा योग्य र सुहाउँदो जीवनसाथीको रहर हुन्छ, जीवनसाथी मात्र भएर हुंँदैन, उसलाई धनको रहर हुन्छ र त्यससँगै हुन्छ सन्तानको रहर । यिनै तीन रहरसँगै जोडिएर आउँछ यश र प्रतिष्ठा कमाउने रहर । त्यसो त पोको नै हो मानिस रहरहरूको । कसैलाई अकूत धन कमाउने रहर, कसैलाई नाम कमाउने रहर, कसैलाई ठूलो मान्छे बन्ने रहर, कसैलाई अरूलाई ठगी खाने रहर, कसैलाई गफ चुट्ने र घुमी हिँड्ने रहर, कसैलाई भलाद्मी हुने या देखिने रहर, कसैलाई पारिवारिक रवाफ देखाउने रहर, कसैलाई के रहर त कसैलाई के । यावत् रहरका प्रकृतिहरूलाई बालापन, अझ किशोर वयको अवस्थासित तुलना गरी हेरौँ त, मानिसका रहरालु मनका पत्रपत्र आफैँ प्रष्टिँदै जानेछन्, कुनै मोटो पुरानो ठेलीका पानापाना उप्किदै गए जसरी ।
अहो, मानिस सानो छँदा छाती भरिभरि कति सपनारूपी रहर हुने गर्छन्, कस्ताविधि रमाइलारमाइला कल्पनाहरूले डोर्‍याउने गर्छन् । रङ्गीचङ्गी विचारहरूले मन नै फुरुङ्ग्याइदिन्छन् । कतै केही देख्यो भने तत्काल त्यही हुन्छु भन्दै त्यसकै पछि भाग्न खोज्ने बालहठ Û अस्पताल गयो, बालसुलभ इच्छारूपी रहर डक्टर बन्न लालायित हुने । खेलमैदानमा पुग्यो, सफल खेलाडी बन्ने रहर । अध्ययन कक्षमा उपस्थित हुँदा राम्रो शिक्षक बन्ने धोको, गीत सुने गायक बन्ने रहर, गीतकार देखे गीत लेख्ने रहर, वकिल देखे वकालत
-कानुन) पढ्ने रहर, पत्रकार देखे महान् पत्रकार बन्ने रहर, पाइलट देखे विमान उडाउने रहर, योद्धा देखे लडाका बन्ने रहर, सिनेमा हेरे नायक बन्ने र अन्याय एवं खलनायकहरू विरुद्ध लड्ने रहर..., अनि यस्तै केके हो केके । यस्ता एकपछि अर्का क्षणिक रहरालु सपनाहरू सँगाल्नु पनि कति आनन्ददायक हुने गर्छ जीवनको त्यो वयमा । अझ आफूले सोचेअनुसारको आफू बन्न नसक्दा मन कति छटपटिन्छ । केवल तिनै रहरहरूबाहेक जिन्दगी अरू केही हो भन्ने नै लाग्दैन । व्यावहारिक जीवनका जटिलता र उहापोहहरू बाल मस्तिष्कको क्षितिजभन्दा धेरैधेरै टाढा हुन्छन् तर प्रकृति तटस्थ हुन्छ, समय निर्दयी बन्दै जान्छ । जीवनका जटिलताहरू र दैनिक भोगाइहरूको निर्ममताले अँठ्याउँदै लगेपछि धेरैजसो हाम्रा बालरहरहरू फगत लहड बन्न पुग्छन् र बित्दो समयसँगै क्रमशः मधुर स्मृतिमा फेरिंँदै जान्छन् । जतिसुकै रहर गरे पनि हाम्रा बाल रहरहरू फेरि कहिल्यै फर्केर आउन सक्दैनन् । जीवनमा सबै कुरा एकपटक पाइन्छ, घरिघरी पाउन सकिँदैन । सायद यसैको नाम हो मानव जीवन ।
मानिसको जीवन त हो नै रहरहरूको शृङ्खला । एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तासम्म हाँगा फिजाइरहेको हुन्छ यही रहरले । एउटा रहर पूरा भएको हुँदैन अर्को रहर जन्मँंदै गइरहेको हुन्छ । बाबुबाजेहरूले, आमाबज्यैहरूले आफ्नो पालामा अथवा आफूले पूरा गर्न नसकेका रहरहरू, आफूले हासिल गर्न नसकेका उपलब्धिहरू अझ बेलाबखत आफूले प्राप्त गरेका सफलताभन्दा अझ धेरै र लोभलाग्दा सफलताहरू आफ्ना छोराछोरी नातिनातिनीहरूले हासिल गरिदिउन् भन्ने चाहन्छन्, आफ्ना अधूरा रहरहरू नयाँ सन्ततिले पूरा गरेको हेर्ने रहर पाल्छन् । यो प्रवृत्ति रहरहरूको क्रमिकता हो, शृङ्खलाबद्धता हो, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा गइरहने रहरयात्रा हो । यो रहरको कुनै सीमा छैन, कुनै बन्धन छैन, कुनै लगाम छैन र कुनै निर्दिष्ट दिशा पनि छैन । रहरहरूको लिगेसी मानिसमात्रको जन्मजात विशेषता हो, जन्मौटे गुण हो ।
रहर जडता भन्जक हो । मूढता, कुपमन्डुकता र स्थिरता भन्जक हो । यो गतिशीलताको द्योतक हो, निरन्तरताको कण्ठाहार हो । ती सब कुरा रहर नै त हुन्, जसले चाल्र्स डार्बिनलाई मानवको विकासवादको सिद्धान्त पत्ता लगाउन प्रेरित गरे । राइट ब्रदर्सलाई हवाइ जहाज उडाउन, जेम्सवाटलाई वाष्प इन्जिन बनाउन, न्युटनलाई वृक्षबाट स्याउ खसेको देखेर गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त पत्ता लगाउन प्रेरित गर्ने पनि त्यही रहर हो । पटमूर्ख भनेर कहलिएका कालिदास इखरूपी रहरले गर्दा नै कालान्तरमा संस्कृतका महाकवि बन्न पुगे । नेपालकै एक महिला विष्णुकुमारी वाइवा कमै उमेरमा पक्षाघातजस्तो गम्भीर रोगले थला परिन्, उनी आफैँले केही गर्नै नसक्ने भइन् तर उनीभित्र केही गरी देखाउने रहर थियो र उनले यो रहरलाई सकीनसकी कलम समातेर कागजमा आकृति दिन थालिन,् जसले गर्दा उनी अहिले -र पछिसम्म पनि) पारिजातको नामले नेपाली साहित्यमा सर्वप्रमुख महिला साहित्यकारका रूपमा स्थापित हुन पुगेकी छन् । सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे पहिलो पटक सगरमाथा चढे । हिलारीभन्दा पहिलेका संसार प्रसिद्ध बेलायती आरोही जर्ज मेलोरीलाई सोधियो, तिमी किन त्यस्तो हिउँको ढिक्को सगरमाथा चढ्न खोजेर आफ्नो ज्यान जोखिममा हाल्न खोजिरहेछौ ? मेलोरीले सहजतासाथ, हाँस्दै भने, किनभने त्यो त्यहाँ छ ।’ -पछि, उनी सगरमाथाको चुलीमा टेकेर र्फकंदै गर्दा बीच बाटोमा सगरमाथाको हिउँभित्र कतै हराएका थिए भन्ने आममान्यता छ, उनी जीवित र्फकनै सकेनन् र त उनले प्रथम आरोहीको अमर श्रेय पनि पाउन सकेनन्) । जापानकी जुन्को ताबेई त्यहीँ रहरले पहिलो महिला सगरमाथा आरोही बन्न सफल भइन् । नेपालकी पासाङ ल्हामु शेर्पा सगरमाथा त चढिन् तर र्फकंदै गर्दा उनी पनि हिउँको थुप्रोमा हराइन् । सायद रहर गर्दैमा सबै पूरा हुन्छ, रहराएका वस्तु र आवश्यकताहरू जम्मै हासिल हुन्छन् भन्ने पनि होइन । ....... उदाहरणहरू अनेकानेक पाउन सकिन्छ ।
रहर आफैँमा एक प्रवृत्ति, एक विशेषता हो । यो नकारात्मक पनि हुन सक्छ, सकारात्मक पनि । बितेका कालखन्डहरूले पस्केको अनुभव हेर्दा थाहा हुन्छ, जबजब मानिसमा नकारात्मक तवरले रहर हावी हुन गयो तबतब दुनियाँले ठूल्ठूला उत्पात सहनु परेको छ, भिषण रक्तपात ब्यहोर्नु परेको छ, नराम्ररी मानव मथिङ्गल हल्लिएको विवश अनुभव गर्नु परेको छ । सुपर्णखाको काम रहरले राम-रावण युद्धको बाटो निर्माण गर्‍यो । दुर्योधनको इख र धृतराष्ट्रको पुत्र रहरले महाभारतको सर्वविनाशकारी महायुद्ध निम्त्यायो । युनानी योद्धा अलेक्जान्डरले रहर गर्‍यो, विश्व विजेता बन्ने । परिणाम के भयो ? अनगिन्ती नरनारीहरू तरबार, भाला र धनुषवाणहरूका अकाल गाँस बन्न पुगे । हिटलरले आर्य जातीय श्रेष्ठताको रहर गर्‍यो, लाखौँ आबालवृद्धबनिताको जीवन स्वाहा भयो, ग्यास च्याम्बर, बारुद र बमहरूले मानवतालाई क्षतविक्षत पारिदिए । मोहम्मद गोरी, चँगेज खाँ, महमुद गजनवीजस्ता इतिहासका कुख्यात लुटेराहरू, नृशंसताका सारा हद नाघ्ने निरङ्कुश राजामहाराजाहरू, क्रूरतालाई पनि मात गर्ने भोका उपनिवेशवादीहरू सबै नकारात्मक रहर बोक्ने जमात थिए । सुदूर इतिहास नै किन, निकट भूत बनेको बीसौँ शताब्दीको अन्त्यतिरको युगान्डाका इदी अमिन, चिलीका अगस्तो पिनोचे, इरानका आयोतुल्ला खोमेनी, कम्बोडियाका पोलपोट आदिसमेत धेरै तानाशाहहरूले सयौँ हजारौँ निर्दोष नरनारीलाई एकै चिहान पारेका आला घटनाहरू नकारात्मक रहरकै दुखद दृष्टान्त हुन् ।
त्यति मात्र होइन, रहर शारीरिक पनि हुनसक्छ र मानसिक पनि । शारीरिक ऐन्द्रीयहरूलाई वशमा राख्न सक्नु अथवा शारीरिक रहरलाई इच्छाअनुसार दबाउन सक्नु ठूलो खुबी हो तर मानसिक रहरलाई दबाउनु कुनै पौरख होइन । किनभने मनको प्रकृति नै उड्नु हो, यो निरन्तर उडिरहन्छ, नयाँनयांँ सोच विचार र सिर्जनाको खोजीमा भौतारिइरहन्छ मन । यो कुण्ठित भयो भने सिर्जनाहरू कुण्ठित हुन्छन्, अग्रगमनमा तगाराहरू तेर्सिन्छन् तर शरीर चञ्चल हुन्छ र अक्सर दैहिक सुख अनि अघोरी भोग लिप्साको प्राप्तिका लागि लालायित रहन्छ । आम मानिस आफ्ना दैहिक रहरहरूलाई दबाएर देवव्रत भीष्म बन्न सक्दैनन् ।
रहर भनेको चेतना पनि हो । चेतना जसले के ठीक के बेठीक, के सही के गलत, के राम्रो के नराम्रो, के असल के खराब, के सजीव के निर्जीव, के सानो के ठूलो, के तल के माथि, के घाम के छाया, के सत्य के असत्य आदि इत्यादि सबै छुट्याउन मानिसलाई दिशानिर्देश गर्छ । चेतना भन्नुस् या रहर, आखिर यही नै त त्यो अकाट्य अविच्छिन्न आधार हो, जसले मानिसलाई जनावरबाट अलग तुल्याउँछ, जो जनावर र मानिसबीचको विभेद खुट्याउने एकमात्र सहज आधार हो ।
मलाई त लाग्छ, सबै मानिसमा रहर हुनुपर्छ । रहरहरू पाल्नुपर्छ । छैन भन्ने लाग्छ भने पनि आफूभित्र रहर जगाउनुपर्छ । रहरलाई आवश्यकताका रूपमा बुझ्नुभयो भने, भनिएकै पनि छ, आवश्यकता आविष्कारकी जननी हो । पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरणको रहर नजागेको भए नेपाल आजको रूपमा नरहन सक्थ्यो । त्यही रहर र त्यसलाई अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा, बहादुर शाह, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा आदिहरूले होस्टेमा हैसे गरेपछि नै नेपाल राष्ट्रको उदय र विकास हुन सकेको हो । उनीहरूको त्यो पुस्तामा एउटा रहर थियो, एउटा सपना थियो, नेपाल राज्यलाई एक गराउने । उनीहरू बाइसे/चौबीसे राज्यहरूसित लडे, कतै बल काम लाग्यो, कतै कूटनीति । महाशक्तिशाली अङ्ग्रेजहरू उनीहरूको साहस, बहादुरी र आश्चर्यजनक युद्धकौशलबाट प्रभावित भए, अनि त नेपाल कहिल्यै कुनै विदेशी शक्तिको दास बन्नु परेन ।
रहर भनेकै भविष्यवाद हो, आशावाद हो । विगतलाई सम्झेर त्यसको रहर गर्नुमा कुनै उपादेयता छैन । विगत हाम्रो हातबाट फुत्किसकेको छ । त्यो इतिहास हो, त्यसको पुनप्राप्ति सम्भव छैन । त्यसैले मानिस भविष्यजीवी प्राणी हो, ऊ भविष्यका लागि बाँचेको हुन्छ, उसमा जिउने रहर हुन्छ, प्रबल जीजिविषा हुन्छ । उसलाई थाहा छ, पुनर्जन्म छैन, छ भने पनि अर्कोपटक मानव चोला पाउन चौरासी लाख जुनी कुर्नुपर्छ । त्यसैले एक जुनी पाएर मानिसको जिउने धीत मर्दैन, ऊ धेरै अझ धेरै बाँचिरहने रहर गरिरहेको हुन्छ । रहर होस् वा बाध्यता, मानिस कुनै न कुनै आशामा बाँचेको हुन्छ, त्यस्तो आशा जो भविष्यमा पूरा हुन सक्छ, अझ त्यस्तो आशा जो भविष्यमा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ । यो उसको प्रकृति हो, नियति हो । यही प्रवृत्ति हो मानिस मात्रको जीवन बाँच्ने रहर ।
रहर गर्नुभनेको सपना पाल्नु हो । सपना अर्थात् रहरको प्राप्तिका लागि कल्पना गर्नु र त्यसलाई कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भनेर लागिपर्नु हो, त्यस्ता कुराहरूका लागि सङ्घर्ष गर्नु हो जुन कुराहरू पहिले कहिल्यै सम्भव होलान् जस्तै लाग्दैनथिए । गोरेटो बनाउन गाहारो हुन्छ, सडकमा हिँड्न सजिलो । मानव सभ्यताको आदिम युगको घुमन्ते कालखन्डमा यत्रतत्र घुमीहिँड्ने जीवनलाई छोड्ने र निश्चित जग्ग्ाा घेरेर निजी स्वामित्वको रहरपूर्ण सुरुवात गर्ने त्यो पहिलो मानिस को होल्ाा ? एकै ठाउँ बस्ने आफ्नो रहरले गर्दा उसले कति आक्रमण र आलोचना सहनु पर्‍यो होला ? तर उसमा नयाँपन थियो, शनैःशनैः त्यही नयाँपनको किरणले अरूहरूमा पनि त्यस्तै रहर जाग्यो र मनुष्यको घुमन्ते जीवनयापन शैली क्रमशः बिलाउंदै जान थालेर ऊ सामाजिक प्राणीमा रूपान्तरण हुँदै जान थाल्यो । अनि क्रमशः मानव सभ्यताको जग बाक्ँिलदै, अनेक आरोह-अवरोह र उत्थान-पतन सहँदै, तमाम कालखन्ड व्योहोर्दै आजको युगसम्म आइपुगेको हो । रहरले गर्दा नै मनुष्य बेहतर जीवनको खोजीमा हुट्हुटिन्छ, नयाँनयाँ प्रयोग, नूतन सन्धान र अत्यन्त दुष्कर लाग्ने नौलानौला जोखिमहरू उठाउन तम्तयार रहन्छ । त्यसैले, हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने हाम्रा रहरालु पुर्खाहरू स्वप्नदर्शी थिए । रहर पाल्ने र सपनाहरू साँच्ने स्वप्नद्रष्टा मानिसको जहाँतहीँ जहिलेसुकै खाँचो हुन्छ ।
रहरको खडेरीमा होइन, रहरको हरियो बगैँचामा रम्न सक्नुपर्छ किनभने रहर नयाँपनको जनक हो, साहसीहरूको प्रेरणा हो र जुझारुहरूको पाथेय हो । अन्तरहृदयले स्वीकारेको रहरलाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाएर मानिस कर्मभूमिमा अगाडि बढ्यो भने उसले कुनै दिन सहजै शिखर चढ्न सक्छ, सफलता उसका पाइला चुम्न आफैँ ऊ सामु आइपुग्न बाध्य हुन्छ ।
बिहान दस बजे सबैजना आ-आˆनै काममा तल्लीन हुन्छौँ । सबैलाई एकआपसमा गुडमोर्निङ भन्नेबाहेक अरू फुर्सद हुँदैन तर दिउँसोको करिब एक घण्टा हामी सबै मन खोलेर कुरा गछौँ । त्यतिबेला हामी सधैँ छुट्टाछुट्टै विषयमा बहस गर्छौं । कहिलेकाहीँ त ब्रेकटाइम सकिएको पनि पत्तो हुँदैनथ्यो । हाम्रो बहस कहिले हाँसो ठट्यौलीबाट चरम गम्भीरतासम्म पुग्थ्यो, कहिले गम्भीरतामै सीमित हुन्थ्यो भने कहिले गम्भीरताले ठट्यौलीको रूप पनि लिन्थ्यो ।
म्ाहाकवि प्रायः काहिँला भाइलाई लिएर नै हामीकहाँ आउनुहुन्थ्यो । उहाँ एक्लै आउनुभएको सम्झना छैन मलाई । त्यसदिन पनि उहाँहरू दुई जना पिताजीलाई भेट्न आइपुग्नुभयो । बिहानको समय र जाडो याम थियो । महाकविले दौरासुरुवाल, बाक्लो कोट, मख्खीबुट्टे टोपी र गलेबन्दी लगाउनुभएको थियो । पिताजीसँग कुराकानी सकेर उहाँहरू तल ओर्लनुभयो । जुत्ता तलै राख्ने चलन थियो । दुवै भाइले जुत्ता लगाउनुभयो । पिताजी पनि बिदा गर्न तलै आउनुभएको थियो । महाकवि हिँड्न लाग्दा दाहिने गोडाको जुत्ताको तलुवा पूरै जूतो खुूकिएको र लगाएर हिँड्नै नसकिने ूथितिमा पुगेको देखियो । तैपनि त्यही जुत्ता लगाएर ल्यापmयाक्ल्यापmयाक् गर्दै हिँड्ने सुर कूनुभयो महाकविले । पिताजीले भन्नुभयो- ''साहिँलाबाजे Û म अर्को जुत्ता खोज्छु Û'' महाकविलाई बल्लबल्ल मनाएर पिताजी जुत्ता खोज्न थाल्नुभयो । आˆना श्रद्देय मित्रलाई पुरानो जुत्ता दिएर अनादर गर्न पिताजीको आत्माले मानेन । नयाँ जुत्ता कतै भेटिएन । यूतै गम्भीर ूथितिमा पिताजीलाई झट्ट सम्झना भएछ- हिजो मात्र किनेको धागोको तलुवा भएको कपडाको चट्टी Û काठमाडौँमा घरभित्र त्यूतो चट्टी लगाउने चलन निकै थियो त्यसबेला । ूयाण्डल अथवा चप्पल यहाँको बजारमा आइसकेको थिएन । पिताजीले त्यही नयाँ एकजोर चट्टी ल्याएर महाकविको खुट्टा अगाडि राख्तै भन्नुभयो- ''यो लगाएर जानुस् Û'' हार्न नसकी त्यही चट्टी लगाएर ˆयाट्ˆयाट् गर्दै महाकवि हिँड्नुभो । त्यो बेलासम्म मैले महाकविको महìव र मर्यादा बुझिसकेको थिएँ । महान् प्रतिभाले छोडेको यो जुत्ता पनि सङ्ग्राहणीय र अमूल्य निधि हो भन्ने मलाई लाग्यो । त्यो एकजोर जुत्ता सुरक्षित रूपमा राखेँ मैले । मेरा भाइ बहिनीहरू पनि नेपाली साहित्य र महाकवि देवकोटाको महìव बुझ्न सक्ने उमेर र बुद्धिका भइसकेका थिए । महाकविको निधनपछि देवकोटा जयन्ती मनाउने प्रचलन हाम्रो घरमा पनि सुरु गर्‍यौँ । महाकविका तिनै जुत्तालाई पिर्कामाथि राखेर मखमलीे फूलको माला लगाइदिएर प्रणाम गर्दै उनकै कविताका पङ्क्ति पढ्दै श्रद्धाञ्जली चढाएर प्रत्येक वर्ष लक्ष्मीपूजाका दिन देवकोटा जयन्ती मनाउने क्रम थाल्यौँ हामीले ।
-गहनापोखरी, टङ्गाल, काठमाडौँ
Posted by डिआर निश्छल at 11:18 PM No comments:
-गौरादह - ३ , झापा
ठट्टैठट्टामा कस्तो यो प्यार भयो होला
खेलाखेलैमा तिम्रो शिकार भयो होला ।
फुट्यो होला पहिले त संयमको बांध
सानो सियो अनि तरबार भयो होला ।
पारेर छियाछिया मेरो यो मुटुलाई
बाडिलिने कति तयार भयो होला ।
म त पुजारी केवल मोहक त्यो रूपको
कलुषित बरू तिम्रै विचार भयो होला ।
हुनै नपाइ सुरु आज उज्यालोको चर्चा
रातको कालिमा कहाँ फरार भयो होला ।
लुटिएपछि इज्जत दिउँसै चेलीको यहाँ
बदनाम किन नाहकमा अन्धकार भयो होला ।
Posted by डिआर निश्छल at 10:44 AM No comments:
मिर्मिरेमै उज्यालो भो भन्ने नठान ।
अहिले नै आफूलाई धन्य नठान ।
फाल्नुपर्ने अझै धेरै थाङ्नाहरू छन्,
सजिएकी बूढीलाई कन्ने नठान ।
पहरोमा पजेरोले गुड्न जानेन,
गाउँ जाने बाटो आजै खन्ने नठान ।
सडकमै बित्नुपर्ने दिन अझै छन्,
आफ्नो लागि आजै घर बन्ने नठान ।
रविसँग खेल्ने कवि भएको छु म,
मध्यान्नका ताराहरू गन्ने नठान ।
Posted by डिआर निश्छल at 10:40 AM No comments:
-उमेश राई 'अकिञ्चन'
गोर्खा भर्ती जान भनी अरुण तर्दैछु
सानु तिम्रो आँखाबाट ओझेल पर्दैछु।
कहाँ जान मन थियो, फूलजस्ती तिमी छोडी
केही वर्ष पर्खिबस सम्झनाको घुम्टो ओढी,
एउटा सानो नयाँ संसार जोड्न हिँड्दैछु
गोर्खा भर्ती जान भनी अरुण तर्दैछु।।
साकेवामा एक्लै पर्दा दुःखी नहुनु
चिट्ठी/खबर पठाइरहन्छु तिमी नरुनु
तिम्रै मनको पछ्यौरीमा मुटु छोड्दैछु
सानु तिम्रो आँखाबाट ओझेल पर्दैछु।।
Posted by डिआर निश्छल at 10:36 AM No comments:
'किन रोएकी ?मलाई थाहा थियो । तिमीले पनि त मेरा लागि अरुसँग विहे गरिनौं । तीस वर्षसम्म नभेट्दा पनि हाम्रो तन र मन मात्र हैन शरीर पनि चोखो र निर्मल छ निर्मला । तिमीलाई संझेर कतिचोटि रोएको छु । तिमीलाई मैले लेखेको डायरीहरु पढ्यौ भने पनि थाहा हुनेछ । घरमा बुवा आमाले जति गर्दा पनि विहे गर्न मानिन । त्यही चिन्ताले आमा परार साल बित्नु भयो । बुवालाई मुटुको रोग लागी ओछ्यान पर्नु भएको तीन वर्ष पुरा भएर चार वर्ष लागेको छ । मैले त चिने जानेका सबैसँग तिम्रो बारेमा सोधेको सोद्दै तीस बर्ष बिताएकोछु ।' चिनाकुमार पनि निर्मलासँगै भक्कानियो । निर्मलाले विस्तारै चिनाकुमारको हात समाती र उसको आँसु पुछी । चिया चिसो हुनलागि सक्यो । भुटन पनि चिसो भयो पहिला खानु- भोक लागेको होला । अनि त्यस पछि कुरा गराँैला । कुरालाई अन्त मोड्दै उसले चिनाकुमारलाई खाजा खान अनुरोध गरी ।
Posted by डिआर निश्छल at 10:34 AM No comments: